ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇူလိုင်လ 2, 2020
LB "အကောင်းဆုံးနာမည်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Usain Bolt က“ ကျွန်ုပ်တို့၏ Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သူ၏ကလေးဘဝမှယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုသေသေချာချာဖော်ပြသည်။
Adama Traore ၏ဘဝနှင့်ထ။ ပုံရိပ်ခရက်ဒစ်: လွတ်လပ်သော, SportsMole, ဂျိုး နှင့် FC-Barcelona
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းကသူ့ကြွက်သားတွေတည်ဆောက်ပုံနဲ့သူ့အမြန်နှုန်းကို FIFA နဲ့ကမ္ဘာမှာအမြန်ဆုံးဘောလုံးသမားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ သို့သော်အနည်းငယ်သာစဉ်းစားကြသည် Adama Traoréအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာ။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
အစမှ စတင်၍ သူ၏နာမည်အပြည့်အစုံမှာ Adama Traoré Diarra ဖြစ်သည်။ Adama Traore ကိုမကြာခဏခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသောသူသည်ဇန်နဝါရီ 25 ၏ 1996th နေ့၌သူ၏မိခင်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ Fatoumata နှင့်ဖခင် Baba Traoré ဘာစီလိုနာ၏အနောက်တောင်ဘက်၊ L'Hospitalet de Llobregat ၏မြှို့နယ်တွင်ဖြစ်သည်။ သူသည်အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ရှိသောချစ်စရာကောင်းသောမိဘများမှမွေးဖွားလာသည့်ကလေးသုံးယောက်တွင်ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးကလေးဖြစ်သည်။
Adama Traore မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ သူ၏အမေ (Fatoumata) နှင့်ဖခင် (Baba) ။ IG မှဂုဏ်ပြု
Adama Traore ၏မိဘများသည်စပိန်နိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများဖြစ်ပြီးသူတို့မိသားစုသည်မာလီမှအနောက်အာဖရိကတွင်ရှိသောကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အစွန်အဖျားတစ်ခုပဲ ... အနောက်အာဖရိကရှိမာလီသည်ဆာဟာရသဲကန္တာရ၏ထက်ဝက်ခန့်ရှိပြီးအာဖရိကတွင်အthe္ဌမအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
မာလီ - အာဒမာ Traore မိသားစုမူရင်းနိုင်ငံကိုပြသသောမြေပုံ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် TheFactFile
Adama Traore ၏မိဘများသည်မိမိတို့သားသမီးများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းများပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောမြို့ဖြစ်သောဘာစီလိုနာတွင်အခြေချရန်သူတို့၏မာလီနိုင်ငံမှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာချွတ်ပေးဆောင်ရသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကြီးပြင်းလာတဲ့ Adama Traore ဟာဘောလုံးကြယ်အချို့လိုမဟုတ်ဘူး Gerard Pique, မာရီယို Gotze နှင့် ဟူဂို Llorisstardom သို့မရောက်မီစည်းစိမ်၏ဘဝတွေကိုနထေိုငျသော) ။ သူသည်လူလတ်တန်းစားမိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးမိဘများဖြစ်သည် ကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ့အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ကစားစရာအစုအဝေးများကိုဘောလုံးတစ်ခုသာမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
Adama သည်သူ၏အစ်ကို Moha နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောညီမ Asa နှင့်အတူဘောလုံးချစ်သောအိမ်ထောင်စုတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ စပိန်ဘာစီလိုနာတွင်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး FC Barcelona ကြောင့်သူနှင့်မိသားစုတစ်စုလုံးသည်လှပသောဘောလုံးကစားခြင်းကိုချစ်မြတ်နိုးသည်မှာသဘာဝပင်။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
အေအမ်မာနှင့်သူ၏အစ်ကိုမိုသည်စီအီး L'Hospitalet နယ်ပယ်ရှိဘောလုံးကစားခြင်းတွင်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်မှာအခြားအားကစားများထက်သာလွန်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ Center D'Esports L'Hospitalet, ဘောလုံးပညာရေးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ် ဦး စလုံးကမယုံနိုင်လောက်အောင်တိုးတက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
Adama Traore သည်သူ၏အစောဆုံးဘောလုံးပညာရေးကို CE L'Hospitalet Football Club တွင်ရရှိခဲ့သည်။ ပုံချေးငွေများ BBDFutbool,& ဂျိုး
အစောပိုင်းကတည်းကညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးမှာသူတို့မှာအရည်အချင်းရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတယ်ဆိုတာသိတယ်။ သူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကို၊ Moha နှင့် Adama တို့သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်နေသည်ဟုသံသယမရှိခဲ့ပါ။ သူဟာပိုပြီးအရည်အချင်းရှိတဲ့အတွက်သူ့အစ်ကိုထက်ပိုမြန်တဲ့သူ Adama Traore ပါပဲ။
2004 ယခုနှစ်တွင်ထရာရန်းမိသားစုအိပ်မက်များသည်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည်။ FC ဘာစီလိုနာ၏ကျော်ကြားသောအကယ်ဒမီ La Masia သည် Adama အားစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူ့အစ်ကိုမိုကိုအိမ်နီးချင်းများကဖိတ်ကြားခဲ့သည် နှစ်နှစ်အကြာတွင် Espanyol ။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အိမ်နီးချင်းစီအီး L'Hospitalet နှင့်ခဏတာပြီးနောက်အောင်မြင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွင် Adama Traoréသည်ရှစ်နှစ်အရွယ်တွင်ဘာစီလိုနာ၏ကျော်ကြားသောအကယ်ဒမီ La Masia တွင် 2004 တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
Adama Traore ၏ La Masia - FC Barcelona အကယ်ဒမီကျောင်း၏အစောပိုင်းဘဝ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် ဂျိုး
ထိုအချိန်ကနှင့်ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘောလုံးအကယ်ဒမီတစ်ခုဖြစ်သည့် La Masia သို့ဝင်ရောက်ရန်ကလေးတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာ ၀ င်လိုက်ရင် Adama ကသိပ်ပျော်တာပဲ။ ခိုင်မာသောပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူသည်ပျောက်ဆုံးနေသောမွေးနေ့များနှင့်အိမ်တွင်မျှော်လင့်နေသောအရာများကဲ့သို့သောကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ သူသည်ကလပ်အသင်းနှင့်အစောပိုင်းထင်မြင်ချက်ကိုရရှိစေရန်ဤစွန့်လွှတ်မှုများအားလုံးလိုအပ်ခဲ့သည်။
မင်းသိလား?… La Masia သို့ Adama ပါဝင်သောနှစ် (2004) သည်ထိုနှစ်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည် Lionel Messi အကြီးတန်းဘောလုံး၏မြင်ကွင်းသို့ပေါက်ကွဲခဲ့။ အဲ့ဒီတုန်းက Adama နဲ့တခြားကလေးတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝသူရဲကောင်း AKA ရဲ့ခြေရာကိုနင်းလိုက်တယ် လာ Pulga (ဆိတ်သငယ်).
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
La Masia နှင့်လမ်းမပေါ်တွင် Adama သည်သူသည်အကယ်ဒမီအဆင့်များအတိုင်းဖြတ်သန်းစဉ်တိုးတက်မှုကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည်။ တိုတောင်းသော်လည်းသူ၏ခွန်အား၊ စွမ်းအားနှင့်လျှပ်စီးအရှိန်ကြောင့်လူငယ်ဘ ၀ တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ မင်းသိလား? Adama Traore အမည်ပြောင်ရရှိခဲ့သည် 'Usain Bolt ကဘာစီလိုနာမှာကစားခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်လာလို့ပါပဲ la Masia အကယ်ဒမီ။
Adama Traore သည်သူထက်အသက်ကြီးပြီးပိုကြီးသောပြိုင်ဘက်များနှင့်ကစားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် FC-Barcelona
သူဟာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Adama ဟာအသက်ကြီးတဲ့အုပ်စုတွေကိုဆန့်ကျင်သူတွေကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိတယ် သူ့ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ သူဟာ La Masia မှာသူ့လက်ထက်မှာညာနောက်ခံနဲ့တိုက်ခိုက်သူအဖြစ်အသုံးပြုခံခဲ့ရပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်စုံမှုကြောင့်အခြားကလေးငယ်များသည်အပြိုင်အဆိုင်များသော La Masia အကယ်ဒမီတွင်ကျဆင်းသွားသော်လည်း Adama Traore သည်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသူ၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအထောက်အထားသည် La Masia တွင်သူ၏အချိန်အတွင်းအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောဘောလုံးကစားကွင်းများကိုပြသခဲ့သည်။ AirFutbol မှအထူးခရက်ဒစ်။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
2013 နှစ်တွင် Adama Traore သည်ဘာစီလိုနာ B နှင့်ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီး 40 လိဂ်ပွဲစဉ်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ သူသည်ဘာစီလိုနာ B အသင်းကို 2014 UEFA လူငယ်လိဂ်ကိုအနိုင်ယူရာတွင်ကူညီခဲ့သည်။
ယူအီးအက်ဖ်အေလူငယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အားအသင်းဖော်များနှင့်အတူ Adama Traore ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် TalkSports
ထိုနှစ်တွင်ပင်အက်ဒမာသည်အသင်း၏ဘာစီလိုနာအဆင့်မြင့်အသင်းနှင့်အစားထိုးခဲ့သည် နေမာ လာလီဂါအနိုင်ရ။ ဘာစီလိုနာအသင်း၏အထင်ကရစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အဆင့်မြင့်အသင်းများကစားနိုင်မှုကြောင့်ဥရောပတစ်လွှားကလပ်များသည်သူ၏လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
14 သြဂုတ်လ 2015 တွင်၊ Adama Traoréသည်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အက်စတွန်ဗီလာသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင် Middlesbrough ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး အတိုက်အခံကာကွယ်သူများအတွက်ပြproblemsနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Boro နှင့် Adama Traore ၏အကောင်းဆုံးအားကစားအောင်မြင်မှုသည်ကျော်ကြားသောအချိန်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်3ဂိုးဆက်တိုက်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည့်ဆု; “(1) Middlesbrough ၏တစ်နှစ်တာ၏ပရိသတ်များ၊ (2) Middlesbrough's နှင့် (3) အတွက်တစ်နှစ်တာ၏လူငယ်ကစားသမား (XNUMX) Middlesbrough ၏တစ်နှစ်တာကစားသမား၏ကစားသမား။
Adama Traore သည်သူ၏ Middlesbrough ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Middlesbrough တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
Middlesbrough တွင် Adama Traoré၏အောင်မြင်မှုသည် Wolverhampton Wanderers ကိုဆွဲဆောင်။ သူ့ကိုဝယ်ရန်မျက်တောင်ခတ်မထားခဲ့ပါ။ သူ့နည်းပြ Nuno Espírito Santo ပင်ပန်းနေသည့်ခြေထောက်များကိုချေမှုန်းရန်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများမှတစ်ဆင့်သူ၏မြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရန်သူ၏ရည်မှန်းချက်တွင် tremendoius အောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
Adama Traore- ငြီးငွေ့နေသောပြိုင်ဘက်များကိုအပြစ်ပေးရန်အတွက်ဂိမ်းလက်နက်တစ်ခုအဆုံးတွင်အသုံးပြုသည်
အမှတ်ရစရာမှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ Adama Traore ၏အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းအင်သည်အောက်တိုဘာ6၏ 2019th တွင်အများဆုံးထိသည်။ ဒါဟာ Adama ဖို့ဝိုင်းထားသည့်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည် ဂွာဒီယိုလာမန်စီးတီးအသင်းသည်အဝေးကွင်း၌ (၂) ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည့် (0-2) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏အထင်ရှားဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Adama Traore သည် Man City ကိုအပြစ်ပေးသောနေ့ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 90Min
ယခုအချိန်တွင် Adama ကဘောလုံးပရိသတ်များအားအမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းအင်သည်မျက်မှောက်ခေတ်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး အနေနှင့်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စေခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းပင်ဖြစ်သည်.
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝ
သူသည်ကျော်ကြားမှုနှင့်အထူးသဖြင့် FIFA တွင်ကျော်ကြားမှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် Adama Traore တွင်ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီးရှိမရှိသိရန်ပရိသတ်များစွာကစဉ်းစားကြသည်။ သူရဲ့လှပသောရုပ်သွင်နှင့်လှပသောအသွင်အပြင်သည်ပရိသတ်ပရိသတ်အများစုအတွက်ရည်းစားစာစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်မည်မှာသေချာသည်။
Adama Traore ရည်းစားကဘယ်သူလဲ? ။ IG မှဂုဏ်ပြု
စာရေးနေစဉ်မှာပင်၊ Adama တွင်ရည်းစားထားရှိသူသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်ပါ ၀ င်မှုမှမရှိသောသဲလွန်စများမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ သူထင်တာကသူဟာဘောလုံးကွင်းကိုအာရုံစိုက်ချင်တယ်။ သို့သော်လူငယ်ကစားသမားများစွာသည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်၏အရေးကြီးသောအဆင့်များမှနိမ့်ကျနေစေရန်ဤနည်းကိုပြုမူကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ Adama မှာရည်းစားတစ်ယောက်ရှိသော်လည်းအနည်းဆုံးတော့သူမနှင့်အများပြည်သူနှင့်ဆက်ဆံမှုကိုမပြုလုပ်လိုပါ။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Adama Traore ၏ကွင်းပြင်၌ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိကျွမ်းခြင်းကသင့်အားသူ့အကြောင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံဖော်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ စစမှစ, အာဒမာ၏ပထမတစ်ချက်တွင်သင်သည်အားတက်။ လှိုင်းလေထန်သောအရာတစ်ခု၏အစကိုရိပ်မိနိုင်သည်။ သူသည်အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကြွက်သားထုထည်နှင့်ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုကွင်းပြင်ပြင်၌အထူးအာရုံစိုက်သည်။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် အမှတ်, Adama သူသည်ကိုယ်အလေးချိန်မကြီးသူဖြစ်ကြောင်း, ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောဆိုထားသည် သူ၏စကားများတွင်; “ ငါကကိုယ်အလေးချိန်မကျသွားဘူး လူတွေကဒါကိုမယုံဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာမှန်တယ်” \_ t။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်; Do ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်နေတဲ့ခင်ဗျား၊ သူ့ဓာတ်ပုံကို 17 နှစ်အရွယ်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး အဖြစ်သင်စဉ်းစားမိတဲ့အခါသူပြောတာကိုယုံသလား။ …
17 နှစ်ဘောလုံးသမားအဖြစ် Adama Traore ၏ဓာတ်ပုံ။ Image ကို Credit: Trollfootball
ဒုတိယအချက်မှာသူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘ ၀ တွင် Adama Traore သည်ကမ္ဘာကြီးကိုအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းရန်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေသောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။အရှိန်"သူကဘောလုံး၏ဂိမ်းမှဆောင်တတ်၏။ သငျသညျသူရာထူး၌မကျမည်အကြောင်းတည်း မက်ဆီ နှင့် ကို C စီရော်နယ်ဒိုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ်, ဒါပေမယ့် Adama Traore တန်ခိုးအာနုဘော်သူ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာဖန်တီးထားသည် FIFA18 ဆုပေးပွဲ။ ဗီဒီယိုအထောက်အထား (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝ
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 55,000 မာလီနိုင်ငံသားစပိန်တွင်နေထိုင်သော (Efe အစီရင်ခံစာများ), အဒမာ Traore ရဲ့မိသားစုသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့နာမည်တစ်ခုလုပ်သောသူအနည်းငယ်အောင်မြင်သောသူတို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမိသားစုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုလျက်ရှိသည် ဘောလုံးကိုနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြု၍ ဘဏ္financialာရေးလွတ်လပ်မှုဆီသို့ ဦး တည်သောလမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ခြင်း
Adama Traore အဖေ: ရိုးရှင်းစွာအမည်ပြောင်ခြင်းဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်သူ၏အဖေ "hag"မျိုးရိုးအားဖြင့်စင်ကြယ်သော Malian ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါသူ၏သားနှင့်အတူဖော်ပြထားသည့် Baba ကိုသင်ကြည့်သောအခါတစ်စုံတစ်ခုစိတ်ထဲရောက်လာသည်။ ဖခင်နှင့်သားနှစ် ဦး စလုံး၏၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ (သူတို့အားကြွက်သားတည်ဆောက်!) ။ ခင်ဗျားအလွယ်တကူကောက်ချက်ချနိုင်တယ်။ သူ့အဖေကသူ့အဖေတည်ဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာဒမာယူလိုက်တယ်။
Adama Traore ဖခင်နှင့်အတူ pose ။ အကြွေး: IG
သူဟာ Catalonia ဘောလုံးစက်ရုံမှာရှိနေစဉ် Ada ကောင်းတဲ့ဖခင်များစွာလို Baba ဟာ Adama ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
Adama Traore ၏မိခင် Fatoumata ဆိုတာသူမနာမည်ပါ။အဆိုပါထောက်ခံမိခင်' သူမ၏သား Adama အဆိုအရ; "ကျွန်တော့်အမေကအမြဲတမ်းထောက်မကူညီပေးခဲ့တယ်၊ နေရာတိုင်းမှာငါ့ကိုမောင်းနှင်ပြီးလူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ခေါ်ဆောင်တယ်။ ၀ ံပုလွေအတွက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့တွင်သူမကကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေသည်။ "
သူ့အမေနှင့်အတူ Adama Traore အကြွေး: IG
အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပြီး Adama နဲ့ Fatoumata နှစ် ဦး စလုံးအကြားချစ်ခင်ကြင်နာမှုဟာသူတို့နှလုံးသားရဲ့အခြားချစ်ခင်စုံမက်မှုထက်ကျော်လွန်နေသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
Adama Traore ၏နှမ: အောက်တွင်အာဒမ်အမည်ရှိသောလှပသောအစ်မ၏ညီမလေးဖြစ်သည်။ သူသည်စာရေးချိန်တွင်စပိန်တွင်နေထိုင်ပြီးအင်္ဂလန်ရှိသူမ၏အစ်ကိုကြီးထံမကြာခဏသွားလေ့ရှိသည်။
Adama Traore ကသူ့ညီမ Asa နဲ့အတူရှိနေသည်။ အကြွေး: IG
အေဒရာထရာရ်၏အစ်ကို: Mohamed Traoré Diarra ကိုလည်းအမည်ပြောင်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သည်။Moha"Adama ၏အစ်ကိုဖြစ်သူဖြစ်ပါတယ်။ Moha (29th နိုဝင်ဘာ 1994 တွင်မွေးဖွားသည်) သည် Adama ထက်နှစ်နှစ်ပိုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
Adama Traore ၏အစ်ကို Moha နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Image ကို Credit: Nkistra ။ IG မှဂုဏ်ပြု
သူ၏မိသားစုအရင်းအမြစ်များကိုသစ္စာစောင့်သိသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 17th မှမိုဟာသည် Mali အတွက်စပိန်ကိုကစားခြင်းမှပြောင်းလိုက်သည်။ သူရေးခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူသည်စပိန်ဘောလုံးလိဂ်၏တတိယအဆင့်ဖြစ်သော Segunda División B ရှိစပိန်ကလပ်Hérculesအတွက်ရှေ့ဆောင်အဖြစ်ကစားသည်။
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
ဝင်ငွေရှိသောသူတစ် ဦး ဘောလုံးသမားသည် 2.6 သန်းယူရို (2.2 သန်းပေါင်) စာရေးချိန်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ပုံမှန်ဘ ၀ အတွက်ငွေအလုံအလောက်ရှိသည်။ Adama Traore ၏ဘဏ္successာရေးအောင်မြင်မှုသည်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။
ပိုက်ဆံအများကြီးလုပ်နေတာ ထူးခြားဆန်းကြယ်သောလူနေမှုပုံစံစသည့်နေထိုင်မှုဘ ၀ ကိုကျော်လွန်သွားသည်မဟုတ်ပါ။ ကြီးမားသောအိမ်များနှင့်ကားများပြသသောကစားသမားများအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်သည်။ Adama သူကသူ့ဘဏ္finာရေးစီမံခန့်ခွဲပုံကိုစမတ်သည်။ သူသည်ပျမ်းမျှကားတစ်စီးကိုမောင်းနှင်ကာဘောလုံးသမားတစ် ဦး အတွက်ပျမ်းမျှလူနေမှုပုံစံကိုနေထိုင်သည်။
Adama Traore လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်များ။ Image Credits: CNBC, IG နှင့် Arabian Business ။ Twitter ကိုဂုဏ်တင်ပါတယ်
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
သူ၏အလုပ်အကိုင်တွင်အနည်းဆုံးအခိုက်အတန့် ဇန်နဝါရီလ 2016 သည်သူ့အလုပ်အတွက်အဆိုးဆုံးအချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းသိလား?… ထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် Adama Traore ကို Aston Villa အကြီးတန်းအသင်းမှရာထူးမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဒီရာသီအဆုံးသတ်မှာသူ့အသင်းကိုအင်္ဂလိပ်ထိပ်တန်းလေယာဉ်ကွင်းကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့အသင်းအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့မှာ CV ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ FIFA နှင့်ဝံပုလွေများကစားနေစဉ်ဘောလုံးကျော်ကြားမှုသည် Adama Traore ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အစွမ်းထက်သောဘောလုံးသမားသည်သူ၏ CV ၏လေ့လာချက်များအရသူ၏အောင်မြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာဖော်ပြထားသည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအရေအတွက် Adama Traore ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ Adama Traore ကလေးဘဝအကြောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Gerard Deulofeu ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဒင်းနစ်ဆွာရက်ဇ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Iago Aspas ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Gerard Pique ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်